Ihe izizi Google Pixels na-enweta mmelite kachasị ọhụrụ | Gam akporosis
2016 bụ mgbe Google kpebiri ịhọrọ usoro Pixel maka smartphones ọhụrụ ya, iji megharịa ma dochie Nexu a ma ama. Nke ahụ bụ isi kpatara nnabata nna nna nke ihe Pixels nke ọgbọ nke anọ ugbu a, nke a mara ọkwa na Ọktọba nke afọ a.
Ọ bụ ezie na ha dị ihe dị ka afọ atọ ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-ewetara gị mmelite ngwanrọ kachasị mma, mana nke a bụ nke ikpeazụ. Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ha ka na-eguzo nwa oge na aka nke ndị na-azụ ahịa bụ ndị kpebiri ịzụta mobiles ndị a (Pixel na Pixel XL). Ugbu a, ha bụ ndị nnata ọhụrụ nke ndozi na ndozi, yana ọhụụ nke gam akporo nchedo ọhụụ.
Nke a Disemba 2019 mmelite Ọ na-agbasakwa maka ngwaọrụ ọhụrụ na usoro Pixel yana, dịka anyị na-ekwu, ga - abụ nke ikpeazụ maka ndụ ndụ nke mbụ Pixels, yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke otu n'ime ndị agha a na-agagharị agagharị, ị kwesịrị ị na-eche echiche maka ịnweta ọdụ ọzọ ọzọ ma emesịa ... na ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-enwe ngwugwu gam akporo ngwa ngwa gam akporo kachasị ọhụrụ n'ọdịnihu.
A na-etinye mmelite ahụ site na OTA na wetara ya ihe ncheta nke December nke na-eme ka ahụhụ na nchedo ọ bụla. Na mgbakwunye, dị ka ọnụ ụzọ ama ama 9to5Google, ọ na - edozi nsogbu 15 na akara mmuta nke December nke '2019-12-01' na 27 maka nchekwa '2019-12-05'. N'ime ndị a, nsogbu ndị ahụ sitere na agafeghị oke na oke egwu, yana nke kachasị njọ metụtara usoro mgbasa ozi yana onye na-awakpo ihe dịpụrụ adịpụ nke nwere ike ịme koodu iwu na-enweghị isi site na faịlụ echepụtara, dịka ụdị nje ụfọdụ ga-emebi. maka onye ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe mbụ Google Pixels na-enweta mmelite ngwanrọ kachasị ọhụrụ
Snapdragon 765 na 765G, chipsets ọhụrụ ejiri 5G gbakwunyere bụ nke gbadoro anya n'etiti etiti